UChief Justice Luke Malaba In Bulawayo
Umthethwandaba weHigh Court uzaqala kusasa ukuhluza udaba lwamagqwetha aphikisa ukuqheliswa kwekontilaka kamahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba nguMongameli Emmerson Mnangagwa ngeminyaka emihlanu izolo.
Abahluleli abathathu abazathetha loludaba bahlangene belungiselela loludaba eHarare izolo.
UMalaba ubemele aye kumpentsheni kulinyanga mhlaka 15 lapho afikisa khona iminyaka yokuphumula engamatshumi ayisikhombisa, 70 years.
Kodwa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe okwenziwe yiZanu PF incedisana leMDC-T kaMnu Douglas Mwonzora kuphe uMnangagwa amandla okwengeza iminyaka yokusebenza kukaMalaba labanye abahluleli benkantolo eziphezulu.
Le yinto esolwa ngamagqwetha Kanye labalwela amalungelo oluntu besitho ayikho emthethweni.
Ngokunjalo bathi inkantolo yeHigh Court kumele yesule ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukaMalaba akhutshwe ayephumula. cUdaba oluzahluzwa kusasa lolu ngolukhwezwe ngumkhokheli wenhlanganiso yeHuman Rights NGO Forum njalo eligqwetha uMnu Musa Kika.
Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance uMnu Felix Magalela Mafa Sibanda yena othi lanxa leli kulinyathelo elihle, amagqwetha engaba ephuzile ukuya enkantolo nanku uMalaba useqheliselwe ikontilaha.